May 13, 2018 - TV Annapurna
आइपीएल : मुम्बईले बनायो १६८ रन, राजस्थान दबाबमा
एघारौं सिजनको इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) क्रिकेटमा मुम्बई इण्डियन्सले राजस्थान रोयल्सलाई १६९ रनको विजय लक्ष्य दिएको छ। घरेलु मैदान वानखेडे स्टेडियममा टस हारेर व्याटिङ्गको निम्तो पाएको मुम्बईले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै १६८ रन बनायो। मुम्बईका लागि इभन लुइसले सर्वाधिक ६० रनको पारी खेले। ४२ रनमा ४ चौका र ४ छक्का उनले प्रहार गरे। सूर्यकुमार यादवले ७ चौकासहित ३८ रन जोडे। हार्दिक पाण्ड्याले ३ चौका र २ छक्कासहित ३६ रन बनाए। बलिङतर्फ बेन स्टोक्स र जोफ्रा आर्चरले २–२ विकेट लिए। जयदेव उनादकट र धवल कुलकर्णीले १–१ विकेट लिए।
म्यान्मारमा भड्किएको हिंसा रोक्न चीनको आग्रह
May 13, 2018 TV-Annapurna
चीनले आफ्नो सिमानासँग जोडिएको म्यानमारको भूभागमा भएको हिंसा रोक्न म्यानमारलाई युद्धविराम गर्न आग्रह गरेको छ । म्यान्माली सेना र स्थानीय आदिवासी जनजातिका विद्रोही समूहका बीचमा भएको भिडन्तमा परी शनिबार १९ जनाको मृत्यु भएपछि चीनले आइतबार यस्तो आग्रह गरेको हो । पछिल्ला केही वर्षमा भएका नराम्रा हिंसाका घटनामा परी म्यानमारमा धेरैजना सर्वसाधारण नागरिक मारिएका छन् । चिनियाँ सिमाना नजिक पर्ने म्यानमारको उत्तरी सान राज्यमा लामो समयदेखि विद्रोह गरिरहेको ताङ नेशनल लिवरेशन आर्मी (टीएनएलए) सँग सरकारी सेनाको शनिबार बिहान छ बजेदेखि भीडन्त शुरु भएको थियोे । “हामीले रातभर र भोलिपल्ट विहान छ…
कलाकार हरिवंश आचार्य बने हजुरबुवा, नाती भेट्न अमेरिका जाने तयारीमा
आफुले निमार्ण गरेको चलचित्र शत्रुगतेले ५१औ दिन मनाएको खुसियालीकाबीच हरिवंशलाई अर्को खुसी थपिएको छ । शनिबार कलाकार हरिवंश आचार्यका छोरा त्रिलोक आचार्यलाई पुत्रलाभ भएपछि आफु हजुरबुवा बन्न पाएको आचार्य निक्कै खुसी छन । शनिबार आफु ५१ दिनको उत्सवमा सहभागी भइरहँदा अमेरिकाबाट छोरा त्रिलोकले हरिवंशलाई फोन गरेर आफु बाबु बनेको खबर दिएका थिए । छोराको फोन सकिनासाथ सबैलाई हजुरबुवा बनेको खबर सुनाएका हरिवंशले भावुक हुदै भनेका थिए ‘हजुरबा हुँदा पनि बाबु बन्दाको जस्तै खुशी लाग्दो रहेछ । अमेरिकी युवती जोयसँग बिवहा गरेर लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका त्रिलोक गतबर्ष आफ्नी श्रीमतिलाई…
संसारकै प्रतिष्ठित मानिने कान्स फिल्म फेस्टिभलमा पहिलोपटक नेपाली सिर्जनाले बाजी मारेको छ । फेस्टिभलको सात दशक लामो इतिहासमै किरण पोखरेलको सर्ट फिल्म ‘विङ्स’ ले एउटा विधामा अवार्ड पाएको हो । कान्सको ७१ औं संस्करणमा नेपाली फिल्म ‘विङ्स’ ले ग्रयान्ड प्राइज जित्यो । यसले निर्देशक किरण पोखरेललाई ५ हजार युरो (झन्डै साढे ६ लाख रुपैयाँ) र इन्टरनेसनल विनर ट्रफी दिलाएको छ । भर्टिकल फम्र्याटमा खिचिएको ३ मिनेटको फिल्मलाई ४० देशबाट प्राप्त करिब चार सय फिल्ममध्ये सर्वोत्कृष्ट घोषित गरिएको थियो । ‘भिसाको समस्या भएर म जान पाइनँ,’ निर्देशक पोखरेलले भने, ‘कस्तो ब्याड लक भयो । तर, यो अवार्डले…
बिष्णुराज उप्रेती । एक्काइसौँ शताब्दीमा राज्य–नागरिक सम्बन्धको अवधारणा अरु विकास भइरहेको र खुला समाजको विकास भइरहेको अवस्थामा व्यक्तिको भूमिका बढी स्वतन्त्र देखिएकाले उसको दायित्व र जिम्मेवारी पनि यसै स्वतन्त्रतासँग जोडिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले राज्यबाट र राज्यले नागरिकबाट विशिष्ठखालका अपेक्षा राखिरहेका हुन्छन्। यसैको सन्तुलनले कल्याणकारी राज्य र नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्व र स्वामित्वको सम्बन्ध परिभाषित गरेको हुन्छ। तर द्वन्द्व, हिंसा र अस्थिरताले सताएका देशहरूमा राज्य–नागरिक सम्बन्ध खलबलिएको र अविश्वास, शंका, द्वेष, घृणा र वैमनश्यताले सहअस्तित्व, विविधता, विश्वास र सम्मान विस्थापित गरेको हुन्छ । हाम्रो देशमा पनि विगत दुई दशक…
श्रीधर गौतम । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा हुन गइरहेको एकतालाई लिएर जनतामा कतिपय भ्रम छन्। दुई पार्टीबीचको एकताले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ गति लेला ? नेपालको राष्ट्रियता बलियो भएर जाला ? दुई पार्टीबीचको एकतापछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप कम भएर जाला ? दुई पार्टीबीचको एकता भएन अथवा एकता भएर पनि लामो समयसम्म टिकेन भने देशको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआउला ? यस्तै–यस्तै प्रश्नहरू उठिरहेको अवस्थामा वाम गठबन्धनको सरकारबाट कति आशा गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा खोतल्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। एमाले र माओवादी केन्द्रले सबैलाई आश्चर्यमा पार्ने गरी गत सालको संसदीय एवं प्रादेशिक…
डम्बर खतिवडा । समृद्धिको एक प्रमुख सर्त सुशासन हो । शासन प्रणाली र संस्कृतिको उपयुक्तता, स्वच्छता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि नभईकन समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वामपन्थी भनिने वर्तमान सरकारले जुन स्तरमा ‘समृद्धि’को कुरा गरिरहेको छ, त्यसलाई प्रत्याभूत गर्न सरकारको सुशासन योजना र रणनीति के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । सुशासनको सैद्धान्तिक चर्चा यतिखेर सायदै जरुरी छ । कम्तीमा विगत तीन दशकयता सुशासनबारे सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट अनेकन छलफल, संगोष्ठी आयोजना, आयोग निर्माण र प्रतिवेदनहरू तयार भएका छन् । विश्वविद्यालयका कोर्सबुकदेखि आमसञ्चारमा छाउने टिप्पणीमा…
चिनियाँ अर्बपति एनजी लेप्सेङलाई चार वर्षको कैदैको फैसला सुनाइएको छ। राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएको कारण उनलाई अमेरिकाको संघीय अदालतले चार वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो। मकाउका ६९ वर्षीय व्यवसायी भ्रष्टाचारका मुद्दामा दोषी रहेको सन् २०१७ को जुलाई महिनामा गरिएको पाँच साताको परीक्षणले देखाएको थियो। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाका अध्यक्ष र पूर्व डेप्युटी राजदूतलाई घुस दिएको खुल्न आएको हो। उनले छ पटक गरी उनीहरुलाई १३ लाख डलरबराबरको घुस दिएको खुल्न आएको हो। अदालतले चार वर्षको कैदको अवधिमा २५ लाख डलरको जरिवानाको साथै उनले राष्ट्रसंघको कानुनी आम्दानी पनि रोक्ने निर्णय गरेको छ। एनजीले…
को हुन आचार्य श्रीनिवास ? चिन्नेहरु भन्छन हिन्दुधर्म सिध्याउन नियोजित रुपमा फसाईयो
आफैलाई गोली हान्न लगाएको आरोपमा आचार्य श्रीनिवास अनुसन्धानका लागी प्रहरी हिरासतमा छन । आफुलाई फसाउन खोजेको भन्दै निराहार बसेका श्रीनिवासको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अहिले अस्पतालमा छन । प्रहरीले उनलाई मंगलबार हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा दर्ता गरेको छ। बाराको सिमरा ३ पानीटंकी नजिक घर भएका दिपप्रसाद पण्डित र कान्तिमतीका एक मात्र छोरा श्रीनिवासको जन्म २०४८ भदौ ९ गते नुवाकोटको तारुकामा भएको थियो । श्रीनिवासको न्वरनको नाम दिनेश प्रसाद पण्डित हो । उनले ५ कक्षासम्म सिमरास्थित बोर्डिङ्ग स्कूलमा र एसएलसी स्थानीय सामुदायिक विद्यालयबाट उतिर्ण गरेका थिए । पिता दिपप्रसादले उनलाई उच्च शिक्षा…
प्रदेशः ३ का प्रदेश सदस्य लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर
प्रदेश नं ३ का प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको छ । रारा क्षेत्रको भ्रमण सकेर शनिबार साँझ मात्रै घर फर्किनु भएका उहाँलाई आज मष्तिस्काघात (ब्रेन ह्यामरेज) भएको हो । चाँगुनारायण नगरपालिका–६ तेलकोट निवासी लामिछानेलाई आज अचानक ब्रेन ह्यामरेज भएपछि उहाँको अवस्था गम्भीर भएको नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी भक्तपुरका सदस्य एवं स्थानीयवासी निरञ्जन बजगाईंले जानकारी दिनुभयो । उहाँको सिनामंगलस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको र उहाँको अवस्था स्थिर रहेको उहाँले बताउनुभयो । लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल,…